Real Player 11.0.9.372 Gold Premium...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော်ဒီနေ့ Real Player 11.0.9.372 Gold Premium လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! အသေးစိတ်တော့ ရှင်းပြမနေတော့ပါဘူး အားလုံးသိပြီးသားဆိုတော့...! Update လေးမို့တင်ပေးလိုက်ရတာပါ...! Install လုပ်ပုံလေးကို Software ထဲမှာရေးပေးထားပါတယ်...! ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 12.64MB ရှိပါတယ်...! အသုံးလိုရင်တော့ အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
1 Response to Real Player 11.0.9.372 Gold Premium...!
သူငယ်ချင်းအောင်အောင်ရေ..ဒါလေးတော့..ဒေါင်းသွားပါတယ်...သုံးနေတဲ့ IDM ကတခါတလေ.ထထဂေါက်နေလို့..youtube ကကိုယ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေဒေါင်းဖို့..လာလာ 'စား' နေတာကြောင့်...အခုကောင်လေးနဲ့..ကိုင်ပလိုက်အုံးမယ်.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ.....